Domperidone tsindrona - China Ningbo Faharoa hormonina
Operation Boky Torolàlan'ny Domperidone tsindrona Veterinary 【Anaran'ny Veterinary Drug】 【Common Name】: Domperidone tsindrona 【anglisy Name】: Domperidone tsindrona 【Anarana in Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye 【Major Zavatra ilaina】: Domperidone 【Description】: Ity vokatra no colorless mazava rano 【Pharmacological Action】: Izy io dia dopamine receptor miady; Domperidone afaka manakana dopamine avy amin'ny trondro misakana ny fanafahana ny GTH sy ny famokarana atodinaina, ary koa hanamafy orina LHRH-A2 sy sGnRH-A mba hahatonga GT ...
Operation Boky Torolàlan'ny Domperidone tsindrona
【Common Name】: Domperidone tsindrona
【Anglisy Name】: Domperidone tsindrona
【Major Zavatra ilaina】: Domperidone
【Pharmacological Action】: Izy io dia dopamine receptor miady; Domperidone afaka manakana dopamine avy amin'ny trondro misakana ny fanafahana ny GTH sy ny famokarana atodinaina, ary koa hanamafy orina LHRH-A 2 sy sGnRH-A mba hahatonga GTH hanafahana sy ny famokarana atodinaina.
【Hita】: Azo ampiasaina miaraka amin'ny LHRH-A 2 ho solon-induction ny empathema sy ny famokarana atodinaina, mandritra trondro
【Usage sy levitra】: Voalohany, hiova io vokatra amin'ny ara-dalàna araka ny tokony habetsahan'ny ranoka masiran'i mandra milliliter ny rano rehetra dia ahitana 5 ~ 10mg domperidone. Faharoa, afangaro LHRH-A 2 ny tsindrona amin'ny ara-dalàna sasany ranoka masiran'i mba hahazo LHRH-A 2 vahaolana amin'ny fitanana ny 5 ~ 20μg / ml. Hanitsy ny takiana levitra ary afangaro ny ambony vahaolana roa. Avy eo, mampihatra ny mifangaro ho an'ny intraperitoneal tsindrona (base ny pectoral Fin) na intramuscular tsindrona (akaikin'ny fototry ny vombony). Ny levitra for vehivavy trondro isaky ny kilao dia toy izao manaraka izao:
besisika, crucian besisika ahitra besisika chub, bighead dace bream clarias fuscus loach megalobrama amblycephala Erythroculter ilishaeformis
Black besisika mila tsindrona roa. Ny levitra for voalohany tsindrona: DOM 5mg + LHRH-A 2 5μg; ny faharoa tsindrona omena 24 ~ 48 ora taty aoriana miaraka amin'ny levitra ny DOM 5mg + LHRH-A 2 10μg.
Male ray aman-dreny ihany no mila trondro 1/2 ny levitra ho an'ny ray aman-dreny ny vehivavy ambony trondro
【Manana ady zava-mahadomelina Fihetsiky】 Tsy misy manana ady zava-mahadomelina fanehoan-kevitra no hita raha ny soso-kevitra dia nanaraka levitra.
【Javatra Mila Tandremo】:
1. Ray Aman-dreny mampiasa trondro vokatra izany dia voarara hihinana ny olona
2. Mety antoka tsara kokoa fahombiazan'ny amin'ny rano mafana ny 20 ~ 30 ℃. Raha ny rano mari-pana dia ambany noho ny 20 ℃, ny vokatry ny spawning induction kely dia ho fiantraikany.
3. levitra avo loatra dia mety hitarika ho amin'ny tany am-boalohany ny famokarana atodinaina, ary hisy fiantraikany ny tahan'ny fiterahana.
4. Tsara kokoa ny manomana ny fampiasana azy io alohan'ny zava-mahadomelina. Ny zava-mahadomelina dia tokony ho vonona nampidirany ao anatin'ny ora 0.5-1.
【Famaritana】: 2ml: 100mg
Previous: Iombonana amin'ny S-GnRHa Fa tsindrona (Ovuhom)
Manaraka: LHRH-A2 ny fampiasana tsindrona Fish
trondro Farms hormonina Fa fiompiana trondro Ovaprim, Manatsara Spawning Ovaprim